मान्छेले मुर्तिको अगाडि, दश औंला जोड्ने गर्छ
तर, जन्म दिने बाआमा, आश्रम लगि छोड्ने गर्छ
मान्छेले धर्म नमानेपछि, हड्डी र मासु नठानेपछि
प्राप्तीको निम्ति, रगतको नातालाई तोड्ने गर्छ ।
श्वास पनि बुबाले खलाँतीले जस्तो, फेरेको देख्छु
आजभोलि तिमी आउने बाटो मात्र, हेरेको देख्छु
उमेरले पनि डाँडा काट्यो, यौवनले बुढोपन साट्यो
हर रातको सपनीमा गिद्धले घरलाई, घेरेको देख्छु ।
प्रकृतिलाई साँच्ची राखेर, माया गरि दिउँला
उजाड मनको गराहरूमा, बुट्टा भरी दिउँला
तिमी त मेरो खास छौ, भविष्यको आश हौ
तिमीले साथ दिएनौं भने, एक्लै मरि दिउँला ।
आमा हैन उनी श्रीमती, तर रहर गर्थि मैले पढेको हेर्न
असल काम गरिगरी, समाजको अगाडि बढेको हेर्न
उनिले सधैं ईश्वर जप्थिन्, मेरो दुःखमा खुसी थप्थिन्
समस्थल धराबाट, एकपछि अर्को सिडि चढेको हेर्न ।
लाग्छ जिन्दगानी, हाँसी खुसी भई जीउन सकौँ
च्यात्तिएको मन, सियो र धागो भइ सिउन सकौँ
प्रेमको जगेर्ना गर्नु पर्दा, बसन्त नआई झर्नु पर्दा
स्नेहपूर्वक जहर दिँदा, सोमरस झैँ पिउनु सकौँ ।
– सुरज उपाध्याय, पोखरा
म जन्मेको घर भन्दा
तिम्रो घर प्यारो लाग्न थाल्यो
मेरा बा आमा भन्दा
तिम्रा बा आमा आफ्ना लाग्न थाले
सोच्थें तिमी नै मेरो सर्वस्व हौ
आज तिम्रो घरको दैलो टेके पछि
मेरो सिउदो रंगीए पछि
बल्ल थाहा भयो
म प्रेममा होइन
मात्र तिम्रो भ्रममा रमाइरहेको रहेछु ।
सिन्दुर प्रेमको प्रतीक हुने भए
चुरा प्रेमको संगीत हुने भए
सौभाग्य प्रेमको संसार हुने भए
लोग्ने बितेर जादा पनि
श्रीमतीको शरीर भरी छाइरहने थिए
प्रेमको अमूल्य गहना बनेर ।
घरभित्र दिनहुँ झगडा गरेर पनि
घर बाहिर निस्कदा मुसुक्क मुस्कुराउने दम्पतीले झै
मुस्कान सबैले दिन्छन्
सबै मुस्कानहरु प्रेम हुन सक्दैनन् ।
जुन कुरा बुझेर पनि
नबुझे जस्तो गरेऊ
त्यही कुराको पीडा
न देखाउन सकेको छु
न मेटाउन सकेको छु ।
– सुरेशकुमार पान्डे, दाङ
हामी लड्दैछौं अन्धकारको विरूद्धमा,
अन्याय अरू अत्याचारको विरूद्धमा ।
अनुशासन बिना लडाईं जित्न सकिन्न,
लड्नैपर्छ गलत व्यवहारको विरूद्धमा ।
कसैले मातृत्व धरौटीमा राख्न खोज्छ,
आन्दोलित भयौँ ठेकेदारको विरूद्धमा ।
नेता सधैं खशी दिन्छन् फर्शी ल्याउँछन,
लड्दैछौं असमान व्यापारको विरूद्धमा ।
अदुरदर्शिताले देश हरिकंगाल हुँदैछ,
कति लडौँ सधै बालुवाटारको विरुद्धमा ।
मानिसले संघर्ष न गरेर बाँच्न सकिँदैन,
प्राकृतिसँगै यो घर संसारको विरुद्धमा ।
साम्राज्यवादले सधैभरी जाल बुन्नेगर्छ,
श्रमजीवीकै वर्गीय प्यारको विरूद्धमा ।
गजलकार न्यौपानेको गजल संग्रह ‘जीवनको रहस्य’
काठमाडौं : युवा गजलकार सपना न्यौपानेद्वारा लिखित ‘जीवनको रहस्य’ गजल संग्रह सार्वजनिक गरिएको छ । युवा स्रष्टा न्यौपानेको गजल संग्रह एक कार्यक्रमका बीच बुधबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले न्यौपानेको गजलकारिताबारे विशेष चर्चा गरेका थिए । गजलकार न्यौपानेको जीवनको रहस्य गजल संग्रह पहिलो कृति हो । कार्यक्रममा गजलका बियोगी बुढाथोकी, रामप्रसाद दाहाल, ज्ञाननिष्ठ ज्ञवाली, रोशन थापा, सन्ध्या पहाडी, रञ्जना निरौला, राजेन्द्र केसी र गिता मैनालीले संयुक्त रुपमा गजल संग्रह ‘जीवनको रहस्य’ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको कार्यालय पुतलीसडकमा सार्वजनिक गरेका थिए । जीवनको रहस्य गजल संग्रहको प्रकाशक शुभद्रा न्यौपाने हुन् ।
वियोगी बुढाथोकीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार सन्ध्या पहाडीको अध्यक्षता र ज्ञाननिस्ठ ज्ञवालीले पुस्तकको समिक्षा गरेका थिए ।
विमोचित कृतिमा टिप्पणी गर्दै कार्यक्रमका विशिस्ट अतिथि राम प्रसाद दाहालले ‘जीवनको रहस्य’ले वास्तवमै यथार्थ जीवनको चित्रण गरेको र वर्तमान सामाजिक विकृतिमा तिखो प्रहार गरेको बताए ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजकी अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीले यो गजल संग्रह प्रवासमा रहने नेपालीको मात्र आवाज नबोलेर सम्पूर्ण नेपालीको वास्तविकताको आवाज भएको बताइन् ।
ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सनले बजारमा ल्याएको जीवनको रहस्य पुस्तकको मूल्य २०० रुपैयाँ रहेको छ । गजल संग्रहमा ९० वटा गजल समेटिएको ।
जीवनको रहस्य गजलका यस्ता छन् शब्द :
जाँदै छु आमा म बोकि सपनाको भारी
आफ्नो गाउँ घर छोडी त्यो समुन्द्र पारी ।
भो भो मलाई कसैले पर्दैन सिकाउन राम्रोसँग
राम्रो सँग थाहा छ, मलाई मेरो जिम्मेवारी ।
दुःख भन्ने के हो परिवारलाई थाहा हुन्न
परदेशमा खोज्दै हिडे सुख भेट्ने चौतारी ।
आउन त आए प्रदेश कसैको कुरा नसुनि
आज बिरानो यो मुलुकमा हिन्दैछु भौतारी ।
कमाई आए आमा चाडैं सकिने छैन पैसा
उमेर पुगेछ अब खोज्दै दुःख काट्ने दौतरी ।
मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा ४० भाषाका कविता वाचन
काठामाडाैं : अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका अवसरमा ४० भाषाका कविता वाचन भएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव २०७८ मा ४० भाषाका ४६ कवि एवं कवयित्रीले कविता वाचन गरेका हाे ।
सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मातृभाषाको संरक्षणका लागि अछामी भाषाका मनोजकुमार साउद, अठार मगर खाम भाषाका राकेश बिएम ‘चिन्तन’, अवधी भाषाका शवनम श्रीवास्तव, उर्दु भाषाका नासीर मुहमद अन्सार नेपाली, उराँव भाषाका कुमारी सरना उराँव, केवरत भाषाका हेमन्ती केवरत र धिरजकुमार दासले कविता वाचन गरेका थिए ।
यसैगरी खस भाषाका नवीन न्यौपाने, गुरुङ भाषाका तेजबहादुर गुरुङ, घले भाषाका गणेशबहादुर घले, चाम्लिङ राई भाषाका सहस्रा राई, जिरेल भाषाका टीकाभक्त जिरेल, डोटेली भाषाका सरस्वती भाट धामी र राजेन्द्र तारकिणी, ढुट मगर भाषाका हिरामती राना सिञ्जाली, ताजपुरिया भाषाका सपनाकुमारी ताजपुरिया, तामाङ भाषाका अनिता तामाङ, तीन गाउँले थकाली भाषाका रामबहादुर थकाली, थामी भाषाका रुपाकुमारी थामीले पनि आ–आफ्ना भाषामा लेखिएका कविता वाचन गरे ।
थारू डङ्गोरा भाषाका जुनु थारू, थारू मध्य (चितवनीया) भाषाका सावित्री चौधरी, थुलुङ भाषाका सुवोध राई, दनुवार भाषाका रमेशकुमार दनुवार, दुरा भाषाका सीता दुरा, देवास राई भाषाका विष्णु देवास राई, धिमाल भाषाका गणेशमान धिमाल, नाछिरिङ भाषाका प्रतापसिह नाछिरिङ, नेपाल भाषाका ओमनरहरि श्रेष्ठ र काशीराम विरस, बज्जिका भाषाका सन्दीपकुमार साह, बान्तवा राई भाषाका सुमन राई र शुक्र बान्तवाले पनि मातृभाषामा रचना गरिएको कविता वाचन गरेका थिए ।
बायुङ राई भाषाका किशोर बायुङ राई, भोजपुरी भाषाका ऋतिक यादव, मगही भाषाका मुरलीप्रसाद यादव, मेचे भाषाका रोशनी मेचे, मैथिली भाषाका राकेशकुमार झा ‘रसिक’ र रुपेशकुमार सदाय, राजवंशी भाषाका अजयप्रसाद राजवंशी, बाम्बुले राई भाषाका एलिना बाम्बुले राई र रवि बाम्बुले राई, शेर्पा भाषाका आङ्गडेण्डी शेर्पा, सन्थाली भाषाका शिवु मुर्मु, सुनुवार भाषाका सपना सुनुवार, संस्कृत भाषाका प्रा डा विष्णुप्रसाद देवकोटा र हायु भाषाका गुना हायुले पनि मातृभाषामा कविता वाचन गरेकाे थियो ।
प्रतिष्ठानले नेपालका सबै मातृभाषा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ११ वर्ष अघिदेखि २१ फेब्रुअरीका दिन महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ । कार्यक्रमका लागि ४० भाषाका ९७ कविता प्राप्त भएकामा छनोट उपसमितिले ४६ वटा चयन गरेको थियो ।
सम्झनाः तरेलीमा तारानाथ शर्मा
काठमाडौं : झर्रोवादी साहित्यका अगुवा डा. ताना शर्मालाई एकपटक कसैले सोध्यो– आफ्नो जिन्दगीलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
जवाफ थियो– मेरो जिन्दगी गण्डकीको पानी जस्तै हो, कहिले तल त कहिले माथि ।
शर्माको उत्तर जस्तै ताना शर्माले जिन्दगीका अनेक उचारचढावलाई सहन गरे । तर, गत फागून ३ गते उनको जीवनमा यस्तो उतारचढाव आयो कि उनले त्यो उतारचढाव सहन सकेकन् र भौतिक देह त्याग गरी उनी नफर्किने बाटो लागे ।
ताना शर्माको वास्तविक नाम तारानाथ भण्डारी हो, तर उनले बनारसमा पढ्न गएपछि नाम फेरेर ताना शर्मा राखेका थिए । शर्माको जन्म १९९१ असार ९ गते ईलामको बरबोटेमा भएको थियो । उनी पिता प्रजापति उपाध्याय र माता देवकीको पहिलो पुत्र थिए । उनले प्रारम्भिक शिक्षा गाउँबाटै सुरु गरेका थिए । अक्षर चिनिसकेपछि उनले रुद्री, ‘चण्डी” पढेँ, अलिअलि वेद पनि पढाए अनि संस्कृतको अमरकोशको पनि अध्ययन गरे । ज्योतिषको गणना गर्ने किताब पढेका उनले ईलामको चन्द्र–मोहन मिडिल स्कुलमा तीन कक्षादेखि अङ्ग्रेजी पढ्न थालेका थिए ।
६ कक्षासम्म ईलामको फिक्कलमै पढेका उनले दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफमा एकै पटक नौ कक्षामा भर्ना भए । सधंै पहिलो हुने शर्माले १२ कक्षासम्म दार्जिलिङमै पढे । त्यसपछि बनारसबाट बिए गरेर नेपाल फर्किएका शर्मा दोस्रो भाषा अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि पटना पुगेका थिए ।
उनले अमेरिकाको विस्कन्सिन विश्वविद्यालयबाट भाषाविज्ञानमा विद्यावारिधि समेत गरेका थिए । अनि, उनले नेपाल फर्किएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय नेपाली विभागमा केही समय अध्यापन गराए । त्यसक्रममा उनले अमेरिकामा आगन्तुक प्राध्यापकका रुपमा पनि केही वर्ष काम गरे । उनी नियात्रा विधाका संस्थापक, नेपाली निबन्धकार, उपन्यासकार, समालोचक र कथाकार पनि हुन् । ताना शर्मालाई धेरैले सरल साहित्यकार र निर्मम समालोचकका रुपमा पनि ब्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
शर्माको २००८ सालमा दार्जिलिङबाट निस्कने ‘साथी’ साप्ताहिक पत्रिकामा पहिलो ’इलाम’ शीर्षकको निबन्ध छापिएको थियो । ‘इलाम’ निबन्ध छापिएपछि नेपाली साहित्यमा उनको प्रवेश भएको थियो । उनको पहिलो पुस्तक ‘नमस्ते’ निबन्ध संग्रह २०१८ सालमा प्रकाशित भएको थियो । दोस्रो कृति २०२१ सालमा ‘घोत्ल्याइहरू’ समालोचना संग्रह प्रकाशित भयो । गोपालप्रसाद रिमालको ‘आमाको सपना’ कविता सङ्ग्रह २०२० मा र गुरूप्रसाद मैनालीको ’नासो’ कथा सङ्ग्रह २०२१ मा प्रकाशित भएको थियो, जसलाई शर्माले आफैँले सम्पादन गरेका थिए ।
शर्माले २०१३ सालमा बालकृष्ण पोखरेल, कोषराज रेग्मी, चुडामणि रेग्मी, बल्लभमणि दाहालहरुसंग मिलेर झर्रोवादी अभियान सुरु गरेका थिए । झर्राेवादी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य नचाहिँदा क्लिष्ट शब्दावलीहरुलाई हटाएर सरल र सरस नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नु थियो । तत्सम र आगन्तुक भाषाबाट आएका क्लिष्ट शब्दावलीलाई सरलीकरण गर्नु थियो । नेपाली भाषाको अस्तित्व रक्षाको लागि ‘झर्राेवादी आन्दोलन’को सुरुवात गरेको शर्माले बताएका थिए । उनले ‘नौलो पाइलो’ नामक पत्रिका प्रकाशन गर्दै झर्रोवादबारे ब्याख्या र आवश्यकताको चर्चा पनि गरेका थिए ।
साहित्यमा विशेष योगदान पु¥याइरहेका शर्मा निबन्ध संग्रहमा मदन पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति थिए । उनको ‘बेलाईततिर बरालिँदा’ भन्ने कृतिले २०२६ सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी ‘सम र समका कृति’ का लागि २०२९ सालमा शर्माले साझा पुरस्कार पाएका थिए । २०२३ सालमा रत्नश्री स्वर्णपदक प्राप्त गरेका शर्माले २०३९ सालमा सर्वश्रेष्ठ पाठ्यपुस्तक लेखन पुरस्कार समेत पाएका थिए । उनलाई २०४५ सालमा गान्तोक–सिक्किममा अभिनन्दन समेत गरिएको थियो ।
शर्माले मवीवि शाहको ‘उसैका लागि’ कविता संग्रह आलोचना गर्दा तीन महिनाको जेलजीवन विताएका थिए । तर, बालकृष्ण समको ‘चिसो चुल्हो’ कृति समालोचना गर्दा भने उनीहरुबीच निकटता बढेको थियो । नेपाली साहित्यमा निबन्ध, समालोचना, कथासँगै पाँचवटा उपन्यास २०३० मा ‘सुली’, २०२३ मा ‘मेरो कथा’, २०२३ मा ‘ओझेल पर्दा’, २०३५ ‘झझल्को’ , २०४८ मा ‘नेपालदेखि अमेरिकासम्म’ प्रकाशित भएका छन् । उनी समालोचनामा अब्बल भएका कारण उनका उपन्याससंगै केही कृतिहरु ओझेलेमा परेको चर्चा पनि हुने गरेको छ ।
शर्माले जीवनको उत्तरार्धमा संस्कृत भाषा, राष्ट्र राष्ट्रियता र वैदिक वाङ्मयकोे वकालत सुरु गरेका थिए । सुरुवाती चरणमा प्रगतिवादी साहित्यकारको रुपमा परिचित शर्मा २०४७ सालको परिवर्तनपछि भने नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । २०४७ कै परिवर्तनपछि उनी राइजिङ नेपालको सम्पादक समेत बनेका थिए । पछिल्लो समय झर्रोवादी आन्दोलनलाई धेरैले छाड्दै गए पनि साहित्यकार शर्माले भने यसलाई पूर्ण रुपमा त्यागेनन् । बरु, यसको आवश्यकता र महत्वको चर्चा गरिरहे ।
नेपाली साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका शर्माको सम्पादन र मौलिक गरी करिब दुई सय कृति प्रकाशित भएका छन् । नियात्राका सगरमाथा शर्मा भौतिक रुपमा नरहेन पनि उनको कृति र योगदानको भने नेपाली साहित्य क्षेत्रले जुँगौजुँग सम्मान गर्नेछ । अलबिदा साहित्यकार एवं अगुवा ताना शर्मा ।
– सरस्वती पौडेल, चितवन
आकाशका जुन, तारा अनि त्यो बादल हेरेर
फेदमै निदायो बच्चो रुखको काफल हेरेर ।
म चुँडेझको चप्पल लाएरै घरसम्म आइपुगेँ
शहर भरि अरुले लगाएको चप्पल हेरेर ।।
यो जिन्दगीले नै भाँडाकुटी खेलाइराको बेला
छोरछोरी रोइदिन्छन् खेलौनाको पसल हेरेर ।
छोरो परदेशियो, फर्केन अझै घरमा खोइ,
आमा रुँदै छिन् ढोकामा राखेको जल हेरेर ।।
अदालतले बिना सबुत पारपाचुके थमायो,
छोरालाई बाउ दिलाउ यसको सक्कल हेरेर ।
मायाले हो सम्बन्ध र जिम्मेवारी स्थायी हुने
घर नजलाउनु अरु कसैको ताज महल हेरेर ।।
– रमेशचन्द्र घिमिरे, लमजुङ
राति–राति जर्किन बोकेर हिँड्ने दिन आए ।
जाबो हाम्रो भोट पनि किन्ने दिन आए ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा यति खुसी लागेको छ कि
हिजो नचिन्ने नेताले फेरि आज चिन्ने दिन आए ।।
पहरेदार नै मस्त सुतेपछि के अर्थ रह्यो र ?
सुरक्षा दिनेले नै लुटेपछि के अर्थ रह्यो र ?
बोल्नका लागि ञआँझ गरेर के मुख खोलेको थिएँ
विडम्बना, जिब्रो नै थुतेपछि के अर्थ रह्यो र ?
यो सम्बन्ध अरूले देख्न हुन्न दुनियाँलाई रिस हुन्छ
जति छ लिनुस् कि तीस हुन्छ कि चालिस हुन्छ
टेबुलमाथिबाट दिँदा पो घुस दिएको हुन्छ हजुर !
टेबुलमुनिबाट दिन जान्यो भने त्यो बक्सिस हुन्छ ।
प्रपोज डे भन्दैमा माया पाइन्छ र ?
रोज डे कुरेर पनि पिरती लाइन्छ र ?
भ्यालेन्टाइन डे भनेर चेपारो घस्नुपर्दैन भो
माया गर्न कहिल्यै तिथिमिति चाहिन्छ र ?
आफूसँग अमृत राखेर अरूमाथि विषका पोका छरियो
विपक्षीको यात्रामा भाँजो हाल्ने थुप्रै प्रयास गरियो
केही गरे पनि उपाय चल्न सकेन हजुर
आखिर अर्कालाई खनेको खाल्टोमा आफै परियो ।।